Spotify inodarika zvese zvinotarisirwa uye inosvika 113 mamirioni anobhadhara vanyoreri | Ndinobva mac
Sezvo mimhanzi yeApple yekushambadzira yakavhurwa munaJune 2015, iyo yekumhanyisa mimhanzi sevhisi Spotify yaenda kukura mwedzi wega wega nekusvetuka uye kumiganhu, kana ichinyatsofanira kunge iri iyo inopesana, zvirinani kana sevhisi nyowani yerudzi urwu ichipinda muchiitiko.
Zvinoenderana neyazvino dhata yakaburitswa nekambani yeSweden, kubva munaGunyana 30, Spotify ine 113 mamirioni anobhadhara vanyoreri, iyo yakawedzera kune vanoshandisa mamirioni gumi nematanhatu neshanduro neshambadziro, vanoita vashandisi veiri rese sevhisi yemamirioni mazana maviri nemakumi mashanu evanhu, zvishoma zvishoma kupfuura huwandu hwese hwevaUnited States.
Mhedzisiro yakanaka yakawanikwa nekambani mukota yekupedzisira yakagamuchirwa kwazvo pamusika wekutengesa, kubvira iyo kambani yakawana kuwedzera kwe16% mushure mekuzivisa mabhizinesi ekambani. Spotify yakagamuchira 1.561 mamirioni emadhora kuburikidza nevashandisi vakabhadharwa kuwedzera kune mamwe mamirioni zana nemakumi manomwe nematanhatu kubva mushanduro yeSpotify ine ma ads.
Sezvo isu tichigona kuverenga mune chirevo chakatumirwa nekambani kune vezvenhau, Spotify anoti ndizvo kukura kaviri mwedzi nemwedzi pane Apple Music. Uye zvakare, iye anoti zvakare kuzvipira kwemwedzi uno kwakapetwa zvakapetwa kaviri uye kuti kukanzura kwake kwakatemwa muhafu munzvimbo dzichangopfuura.
Idzo nzvimbo dzakakurira zvakanyanya kambani ndidzo Latin America, Southeast Asia neIndia, uko Apple yakadzora mutengo wekunyorera mwedzi mishoma yapfuura kuti izvishongedze nemutengo mumwe chete wakapihwa neSpotify neYouTube Music, asi zvinoita sekunge kwakanonoka kufamba uye vagari venyika vanoramba vachibatanidza zvese zvinopihwa naApple sekunze kwehupfumi hwehomwe dzako.
Nhamba dzekupedzisira dzepamutemo dzatinadzo nezvehuwandu hwevanyori veMusic Music dzinoenderana nemwedzi waChikumi. Kubva munaJune 30, iyo yekumhanyisa mimhanzi sevhisi ye Apple ine mamirioni makumi matanhatu vanyoreri. Kubva ikozvino hatina kudzoka kuti tive nenhamba dzepamutemo nezve huwandu hwevanyori veMusic Music.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Spotify inodarika zvese zvinotarisirwa uye inosvika mamirioni e113 vanobhadhara vanyoreri
Kana AirPods Pro ichidhura, mirira kuti uone mutengo wekugadzirisa kwako
Ichave iri 16-inch MacBook Pro nhasi?